သွားဖုံးရောင်ရမ်းခြင်းအတွက် အိမ်တွင်းကုထုံးများ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
သွားဖုံးရောင်တယ်ဆိုတာ သွားချိုး(ဂျိုး)တွေပေါ်က ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ သွားဖုံးရောဂါတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သွားဖုံးရောင်ခြင်းကို မကုသဘဲထားပါက periodontitis လို့ခေါ်တဲ့ သွားအမြစ်ဝန်းကျင်ရှိ တစ်သျှူးများတွင်ပြည်တည်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပြီး သွားဖုံးရောင်ခြင်းက သွားဖုံးသွေးယိုစီးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့်ရောဂါပိုးမွှား ၀င်ရောက်ဖို့ အလားအလာပိုများစေပါတယ်။ အဖြစ်များတဲ့ရောဂါတခုဖြစ်တာကြောင့် သွားဖုံးရောင်ခြင်းကို သက်သာစေမယ့် အိမ်တွင်ကုထုံးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ပျားရည်ကို သွားဖုံးအပေါ်မှာ သုတ်လိမ်းပေးပါ။ သွားပေါ်မရောက်အောင်တော့ဂရုစိုက်ပါ။
ပင်လယ်ဆား လက်ဖက်စားဇွန်း တဝက်ခန့်ကိုရေများပျော်ဝင်အောင်ဖျော်ပြီး ရလာတဲ့ဆားရည်နဲ့ ပလုပ်ကျင်းပေးပါ။ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သလို ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့လူတွေဟာ သွားဖုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်ဖို့ အလားအလာပိုများတာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို အနိုင်ယူပါ။
4. လက်ဖက်ရည်အိတ် (Tea Bags)
ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ နာကျင်မှုဝေဒနာကို သက်သာစေပါတယ်။ သွားဖုံးပေါ်မှာလက်ဖက်ရည်အိတ်ကို ကပ်ထားပေးပါ။
5. ဗီတာမင် C
ကိုယ်ခံအားနည်းနေခြင်းက သွားဖုံးရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေတာကြောင့် ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကို စားသုံခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။
သံပုရာရည်နှင့် ဆားကိုရောမွှေပြီး အနှစ်ပြုလုပ်ပြီး သွားပေါ်မှာ5မိနစ်ခန့်ကြာအောင်သုတ်လိမ်းပေးပါ။ ပြီးရင်ရေနွေးဖြင့် ဆေးကြောပါ။ သွားဖုံးရောင်ရမ်းခြင်းကိုသက်သာစေသလို သွားချိုး (ဂျိုး) တွေကို ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကိုအသုံးပြုပြီး သွားတိုက်ပါ။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါက သွားကြွေလွှာတွေကို ဖျက်ဆီးတဲ့ အက်ဆစ်ဓာတ်ကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိပြီး သွားဖုံးအတွင်းရောဂါပိုးဝင်ရောက်ခြင်းကို ကုသနိုင်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူတွေမှာ သွားဖုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေဟာ 80% ပိုပါတယ်။ နီကိုတင်းဓာတ်ဟာ ဘက်တီးရီးယားပမာဏကို တိုးပွားစေပြီး သွားချေးတတ်စေတာကြောင့် ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။
9. ဗီတာမင် D
ဗီတာမင် D ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာ (သို့) ဖြည့်စွက်စာမှီဝဲပါ။ ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး သွားဖုံးရောင်ခြင်းကို ခဏခဏမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
10. Listerine (လစ်စထရင်း)
Listerine နဲ့ ခံတွင်းကိုဆေးခြင်းဖြင့် ဘက်တီးရီးယားနဲ့ သွားချေးလွှာတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ တနေ့ 1-2 ကြိမ်ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
11. Tea tree oil toothpaste (ဆေးဖက်ဝင် အဆီပါဝင်တဲ့ သွားတိုက်ဆေး)
ဆေးဖက်ဝင်အဆီမှာရောင်ရမ်းမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး ဘက်တီးရီးယားတွေသေစေနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေရှိပါတယ်။
Chlorhexidine ပါဝင်တဲ့ ခံတွင်းဖျန်းဆေးတွေဟာ ပိုးမွှားနဲ့ သွားချိုး (ဂျိုး)တွေကို လျော့ပါးအောင်ပြုလုပ်ရာမှာလည်း လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။